सुन चाँदीको मूलयमा भारी गिरावाट, एकै दिन १७ सयले घट्यो, कतिमा हुँदै छ कारोबार ? « Artha Path
सुन चाँदीको मूलयमा भारी गिरावाट, एकै दिन १७ सयले घट्यो, कतिमा हुँदै छ कारोबार ?
काठमाडौं । मंगलबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा १७ सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ८७ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, मंगलबार तेजाबी सुनको मूल्य १७ सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ८६ हजार ५५० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यस्तै, चाँदीको मूल्य तोलामा ४५ रुपैयाँले घटेर १२ सय ९० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।